Firefox 95 inouya neRLBox uye saiti yekuvhara maitiro kune wese munhu, kuvandudzwa kweWayland nezvimwe zvakawanda | Linux Addicts
Firefox 95 inouya neRLBox uye saiti yekuvhara maitiro kune wese munhu, kuvandudzwa kweWayland nezvimwe zvakawanda.
The kutanga kweshanduro itsva yeFirefox 95 web browser, pamwe chete neshanduro yevhezheni yakagadzirwawo nenguva yakareba yekutsigira Firefox 91.4.0.
Pamusoro pezvitsva uye zvigadziriso zvebug zvinoratidzwa mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 95, se 18 kusasimba kwakagadziriswa, iyo 11 yakanyorwa seine ngozi. 8 kusasimba kunokonzerwa nematambudziko ekurangarira, senge buffer mafashama uye kuwana kune dzakatosunungurwa ndangariro nzvimbo. Aya matambudziko anogona kutungamira mukuitwa kwekurwisa kodhi kana uchivhura mapeji akagadzirwa.
1 Main nhau muFirefox 95
Main nhau muFirefox 95
Mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 95 imwe yekuwedzera insulation layer yakavakirwa paRLBox tekinoroji yaitwa kune ese anotsigirwa mapuratifomu. Iyo yakarongwa insulation layer inopa kuvharika kwematambudziko ekuchengetedza mumaraibhurari echitatu-bato mabasa izvo zvisiri pasi pehutongi hwevagadziri veFirefox, asi izvo zvinogona kukanganisa purojekiti huru kana kusasimba kwakaonekwa. Iyo yazvino vhezheni inoshandisa RLBox kusiyanisa iyo Graphite, Hunspell, uye Ogg raibhurari, uye inotevera vhezheni inotarisirwa kuparadzanisa Expat uye Woff2.
Kune vese vashandisi, nzvimbo yekuvhara saiti yakavhurwa, yakagadziridzwa mukati megadziriro yeFission project. Kusiyana nekugovewa kwekupokana kweiyo tebhu kugadzirisa muboka rinowanikwa rekuita (8 nekusarudzika), iro rakashandiswa kusvika pari zvino, iyo yekukiya modhi inofambisa kugadziridzwa kwesaiti yega yega kune yayo yakaparadzana maitiro, nekupatsanura kwete nematabhu, asi nemadomasi. .
Zvakare Basa rakaramba richivandudza rutsigiro rweWayland protocol. Iyo Wayland port yeFirefox yakaunzwa kune general parity mukushanda neiyo X11 kuvaka kana ichimhanya munzvimbo yeGNOME. Mumenu yemamiriro ezvinhu «PIP» (Mufananidzo-mu-Mufananidzo) yakawedzerwa sarudzo yekufambisa bhatani kuti uchinje maitiro ekutamba nenzira yakatarisana muvhidhiyo.
Yakagonesa mushandisi kukosha kudarika kweSlack.com ku "Chrome", iyo kubvumirwa kupinda kune mamwe maSlack maficha, senge izwi / vhidhiyo kufona uye huddles izvoyaimbove isingawanikwe pakuvhura saiti muFirefox.
Muiyo Android vhezheni, chikamu chitsva cheKutanga chaitwa mumenu yekumisikidza. Iyo "Jump back in" peji inopa kuratidzwa kwemifananidzo mikuru yemasaiti (Hero Mufananidzo). Meseji yekusimbisa yaitwa kana iyo otomatiki tebhu yekuvhara modhi yakagoneswa.
sudo snap install firefox-95.0.snap
Munguva pfupi iri kutevera, iyo Firefox 96 vhezheni ichaenda kune iyo beta yekuyedza nhanho, iyo yakarongerwa kuvhurwa muna Ndira 11.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 95 inouya neRLBox uye saiti yekuvhara maitiro kune wese munhu, kuvandudzwa kweWayland nezvimwe zvakawanda.
Uye kurarama kwenguva refu Fiferox !!
Ventoy: chishandiso chekugadzira multiboot USB inowedzera maficha matsva
WorldBox - Mwari Simulator - Yakatangwa muKuwana Kwekutanga paSteam